Boky fandokoana isa sy litera
Ny niandohan'ny isantsika - ny loharanon'ny fahalalana rehetra
Hianatra ny isa voalohany ve ny zanakao? Ary mianatra ny litera voalohany? Manolotra pejy fandokoana isa sy taratasy izay tadiavin'ny ankizy mianatra izahay hanakaiky ny isa voalohany. Mahafinaritra ny aritmetika sy ny famakiana hatramin'ny voalohany!
Isa ho an'ny fandokoana
Miloko amin'ny litera
Ny olona rehetra dia niara-niasa tamin'izy ireo farafaharatsiny tany am-pianarana ary ny ankamaroan'izy ireo dia hiaraka amin'izy ireo mandritra ny androm-piainany - ny isantsika. Saingy zara raha misy manontany tena hoe: Avy aiza ireo isa ireo? Iza no nampivoatra azy ireo ary nahoana? Ny valiny dia antitra noho ny nieritreretanao azy.
Ny niandohan'ny fototry ny isa ankapobeny dia niverina an'arivony taona maro.
Fa maninona no isa Arabo? Avy aiza ny isantsika? - © meen_na / Adobe Stock
Na izany aza, tsy ny isa "iray" ihany no nivoatra nandritra ny an'arivony taona. Toy ny amin'ny fiteny, dia misy tarehimarika maromaro. Ka ny iray mampiavaka indrindra ny Romanina sy ny antsika, ny isa Arabo.
Isa arabo sa karana?
“Tsy mampiasa nomerao Arabo izahay!” Raha ny fahitana azy, toa tsy dia lavitra loatra ity lahatsoratra ity. Fa raha jerenao akaiky ny tantara dia ho hitanao fa ny isantsika dia ny isa Arabo. Ary raha mijery akaiky ianao dia ho hitanao izany Ny isa Arabo dia isa Indiana tokoa. Ity "mix-up" ity dia vokatry ny Arabo. Nentin'izy ireo tany Eropa ny isa Indiana, ka izany no iantsoantsika ny isa anay ankehitriny. Samy marina ny karazany roa, ny karana iray tsy dia malaza loatra.
Isa anay vs isa romana
Tahaka ny olona rehetra farafaharatsiny niasa tamin'ny isa tany am-pianarana, ny sasany koa dia nifandray tamin'ny tarehimarika romana. Ny fanontaniana noho izany dia zara raha mipetraka hoe maninona ny tarehimarika romana no tsy naharesy ny Arabo. Ny anay dia tsotra sy tsotra Moramora. Raha tsy miasa afa-tsy isa 10 isika, izany hoe avy amin'ny 0-9, ary afaka mampiasa azy ireo hahatratrarana ny fangaro isa rehetra, ny Romanina dia mila marika vaovao ho an'ny isa tsirairay.
Ohatra iray hanazavana
maty 1. Ny tarehimarika romana dia mamaritra azy ireo a I, ny 2 miaraka amin'ny II, ary ny 3 miaraka amin'ny III. Hatreto, mora be. Fa izao tonga ny mpandaka: The 4 dia tsy naseho ho IIII, fa toy ny IV. Ny fandikana ity dia ho toy ny "alohan'ny dimy", satria ny 5 dia aseho amin'ny V ao amin'ny rafitra romana isa. Ny 6 dia tonga amin'ny VI, ny 7 ho VII, ny 8 ho VIII ary ny 9 indray ho IX, eo X = 10 izany.
Manjaka ny fahatsorana
Araka ny hitanao, ny tarehimarika romana dia sarotra kokoa noho ny isa Arabo. Ity no antony tsotra nanjakan'ny Arabo tamin'ny Romanina. Tsy mora ny manao kajy amin'ny litera, satria voafetra ny abidia ary betsaka ny tokony hodinihina amin'ity fomba ity mba tsy hafangaro.
Isa nomen'ny litera modely
Taratasy modely miloko | am-pianarana
Taratasy pejy fandokoana
Isa isa momba ny pejy fandokoana - 1
Isa isa momba ny pejy fandokoana - 2
Isa isa momba ny pejy fandokoana - 3
Isa isa momba ny pejy fandokoana - 4
Isa isa momba ny pejy fandokoana - 5